Misy ireo fitaovana fototra na vokatra tsy hita. Inona no tokony hataoko ? - Rikoooo
Misy fiantraikany fototra gauges na dia tsy hita. Inona no tokony hataoko ?
Rehefa be dia be ny fanovana natao tao an-«hijerena» fampirimana, dia matetika ny ao anatin'ny antontan-taratasy ireo ny tena ratsy tsy hita. Raha izany, raha misy add-eo amin'ny zavatra ilaina taratasy misy hevitra antontan-taratasy, dia tsy ho afaka hampiseho ny gauges ho any amin'ny tontonana. Matetika dia ahitana vahaolana amin'ny reinstalling FSX. Mba tsy reinstalling FSX, dia afaka misintona hijerena sitrana, Izay kely fandaharana noforonin'ny Rikoooo izay rehetra tany am-boalohany indray rakitra avy amin'ny «Gauges» sy «Effects» lahatahiry.
Update 13 / 02 / 2014: A Prepar3d dikan no namoronana azy.